Nhumwa dzaVaZuma Dzinotanga Hurukuro dzeNhaurirano muZimbabwe
Kurume 15, 2010
Chikwata chenhumwa dzemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, icho chiri kubatsira munhaurirano pakati pemapato maviri eMDC neZanu PF, chapinda munyika neMuvhuro.
Ivo VaZuma mbune vari kutarisirwa kupinda munyika neChipiri kuti vaedze kumutsiridza nhaurirano idzi, idzo dzakanzi neMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, dzafa, zvichitevera kuramba kutsukunyuka kuri kuitwa nemutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe.
MDC yakanyorawo tsamba kuna VaZuma mwedzi wapera, ichivakurudzira kuti vapindire munhaurirano idzi sezvo pakanga pasina chaifamba.
Vari kutungamira chikwata chaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vaudza Studio7 kuti vachatanga nhaurirano manheru eMuvhuro wakare, uye vanga vachisangana nguva imwe chete nevose vari kumirira mapato munhaurirano idzi.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuti musangano uyu wafamba seyi.
Chikwata chaVaZuma chinouya apo VaTsvangirai vari kunetsana naVaMugabe muhurumende yemubatanidzwa.
VaMugabe vari kuramba kugadza magavhuna eMDC mumatunhu akakunda bato iri. VaMugabe vanonzi vari kuramba zvakare kugadza VaRoy Bennett semutevedzeri wegurukota rezvekurima, vachiti vachaita izvi chete kana VaBennett vachenurwa nedare.
VaMugabe vari kutiwo havasi kuzotambira zviri kudiwa neMDC, kudzamara zvirango zvavakatemerwa pamwe nevamwe vavo zvabviswa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vanoti havaoni gakava riripo richipedzwa sezvinodiwa neveruzhinji. VaMakumbe vatiwo vanoona VaZuma vachiisira MDC yaVaTsvangirai mutoro wekuti isimudze izwi rayo panyaya yekuti zvirango zvakatemerwa VaMugabe pamwe nevamwe vavo, zvibviswe.